Ny Ubuntu Touch dia lasa misy amin'ny sary ARM 64-bit | Ubunlog
Nanjary azo alaina amin'ny sary ARM 64-bit ny Ubuntu Touch
Rehefa nilaza izany tamintsika i Canonical Ubuntu Touch ary ny fifamatorana, tsy vitsy izahay no faly. Heveriko fa tsy vitsy tamintsika no nahatsapa fahadisoam-panantenana lehibe rehefa fantatr'i Mark Shuttleworth sy ny orinasa fa tsy zavatra mety izany, tsy raha tian'izy ireo hijanona ho tsara tahaka izany ny rafitry ny birao. Fa ny rafi-piasan'ny finday izay natombok'i Canonical dia tsy maty; UBports nikarakara azy ary mandrosoa hatrany.
Ny Ubuntu Touch dia tsy ahitana zava-baovao marobe na miavaka toy ny rafi-piasan'ny finday hafa toa ny Android na ny iOS, na dia betsaka aza ny Plasma Mobile, saingy mihatsara isaky ny manomboka. Ary androany dia nanomboka zava-baovao izy ireo: na dia efa ela aza ny Ubuntu Touch no mandeha amin'ny fitaovana AArch64, dia mbola 32-bit ny sary ISO. Manomboka anio koa nanomboka nanolotra sary ARM 64-bit.
Ny Ubuntu Touch's OTA-11 dia tonga miaraka amin'ny fitantanana lahatsoratra voajanahary kokoa
Ubuntu Touch izao dia manohana kokoa ny 4GB RAM
Anisan'ireo fanatsarana atolotry ny sary 64-bit ananantsika fa manohana tsara kokoa ny 4GB RAM izy ireo, izay misokatra haingana kokoa ny fampiharana na manome tolotra tsara kokoa noho ny maritrano ARMv8. Raha mijery ny ho avy dia manokatra varavarana amin'ny fampiharana 64-bit izay matanjaka kokoa noho ireo 32-bit.
Araka ny hazavain'ny UBports ao aminy naoty fampahalalana, dieny izao dia azonao atao ny mampiasa ny fanontana Ubuntu Touch 64-bit ARM ny Sony Xperia X sy ny OnePlus 3 ary 3T. Dingana voalohany ihany, fa dingana iray lehibe, izay ny fiandohan'ny tetezamita amin'ny 32-bit mankany 64-bit.
Etsy ankilany, lIreo mpikirakira UBports manohy mamolavola Ubuntu Touch dia nampiditra ny Mir 1.x sy ny Unity 8 vaovao ao amin'ny fantsom-pivoaran'izy ireo ihany koa, namoaka installer nohavaozina sy ny Ny mpanjifa telegram koa dia nohavaozina, satria tsy tokony hohadinointsika fa io karazana fitaovana io dia natao hifandraisana amin'ireo olon-tiantsika koa. Miadana nefa miaraka amina tononkira tsara dia manohy mihatsara hatrany i Ubuntu Touch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Phone » Nanjary azo alaina amin'ny sary ARM 64-bit ny Ubuntu Touch
Ho mifanaraka amin'ny fitaovana maro kokoa ve izy io?
Ary hanana WhatsApp ve izany?
pablinux dia hoy izy:
Salama Felipe. Manampy fitaovana indraindray izy ireo, saingy tsy afaka manome toky anao aho. WhatsApp, amin'ny voalohany, dia ho an'ny rafi-piasan'ny finday mifandraika aminy ihany, ka azo antoka fa amin'ny iOS sy Android ihany. Etsy ankilany, mandeha ny tsaho fa hisy ny kinova tsy miankina amin'ny WhatsApp (tsy tranonkala), ka AZO atao raha misy ny endriny birao.
Valiny tamin'i Pablinux
https://elcondonrotodegnu.wordpress.com dia hoy izy:
Ireto ny fitaovana tohananay:
Manana Anbox (tsy misy amin'ny fitaovana rehetra) izahay ho an'ny whatsapp sy rindranasa Android hafa, tsy dia matotra loatra izy io fa mamela antsika hiala amin'ny olana.
Valio ny https://elcondonrotodegnu.wordpress.com
Tsy azoko tsara ny antony ilazanao izany:
"Ny Ubuntu Touch dia tsy ahitana zava-baovao marobe na miavaka toy ny rafi-piasana finday hafa toa ny Android na iOS, na dia betsaka aza ny Plasma Mobile"
Azonao atao ny miady hevitra amiko, hoy aho tamin'ny an'ny Plasma Mobile.
Raha ny tokony ho izy, tsara raha manavao ireo sary napetrakao ianao rehefa miresaka momba ny Ubuntu Touch, efa antitra be izy ireo ary mieritreritra aho fa tsy tena izy ireo akory, heveriko fa porofon'ny foto-kevitr'i Canonical izy ireo.
Eo anelanelan'ny fanavaozana sy fanavaozana. Izy ireo dia tsy mampiditra asa miavaka sy manan-danja betsaka toy ny amin'ny Android sy iOS ary amin'ny fampivoarana ny Plasma Mobile dia miresaka vaovao maro hafa koa izy ireo.
Heveriko fa satria misy fanavaozana isaky ny roa volana.
Ao amin'ny plasma ny marina dia tsy mbola nahare vaovao aho (raha lazainao fa mino aho), saingy ara-dalàna izany satria ny rafitra indrisy dia mila azy io satria tsy azo ampiasaina amin'izao fotoana izao.
KYROSY dia hoy izy:
Salama, fantatrao ve hoe rahoviana no hisy ny kinova andrana voalohany?
Valio amin'i CIRO
Salama Ciro, kinova fitsapana inona?
k dia hoy izy:
Nametraka ny kinova 14.4 amin'ny virtoaly aho ary nanandrana nanaraka ireo dingana fa tsy afaka mamorona ilay ohatra hoe mahazo lesoka aho, izay manana sary hampiasaina amin'ny virtoaly virtoaly, noraisiko ity rafitra ity hanolotra azy ao an-dakilasy ary tsy mety amiko izany.
Chrome OS 78 tonga miaraka amin'ny fanohanan'ny birao virtoaly, backup, mpamaky efijery ary maro hafa
Microsoft dia nandao ny sary famantarana mahazatra an'ny mpizahatany ary nanangana marika vaovao